5-ta shay ee ugu horeysa ee dila Daacada Macaamiisha | Martech Zone
Sheeko aan inta badan la wadaago shirkadaha ayaa ah inaan u shaqeeyey shirkad ka soo kortay dhowr shaqaale una soo iibsatay balaayiin doollar - khibradda isticmaale-na waxay ahayd mid aad u xun. Xaqiiqdii, waxaa jiray dhinacyo ka mid ah nidaamka oo ahaa faa'iido tartan… laakiin inta badan, waxay ahayd riyo qarow. Waxa ka kordhay shirkadda wixii qofba male mooyee waxay ahayd saddex shay - iibinta, suuqgeynta, iyo adeegga macaamiisha.
Meeshii madalku ka maqnaa, maareynta koontada iyo shaqaalaha taakuleynta macaamiisha kaliya ma aysan sameyn farqiga - waxay dhaafeen dhammaan wixii laga filayay. Iyada oo ay ku badan yihiin warbaahinta bulshada iyo boggaga dib u eegista, saameynta xun iyo tan togan ee aqoonsiga dadweynuhu si fudud uguma fiicna adeegga macaamiisha, waxay sidoo kale ku fiican tahay helitaanka suuqgeynta sidoo kale.
5-ta Sababood ee ugu Sareeya ee Abuurista Hoos udhaca Daacadnimada Macaamiisha
Lagu kala wareejinayo shaqaalaha.
Jawaab lagama helin emayl.
Dhererka waqtiga ee haynta
Awood la'aanta inaad gaarto bini aadam.
Shaqaalaha aan la aqoon.
Marka lesson casharka halkan laga bartay ayaa ah in wada xiriirka uu fure u yahay adeegga macaamiisha ee weyn iyo daacadnimada macaamiisha! Maareynta koontada iyo adeegga macaamilku maahan wax kharash ah oo shirkadaha loogu talo galay, waa xarun faa'iido leh oo cajiib ah oo leh soo-celin wanaagsan oo xagga maalgashiga ah. Warka xun ayaa ah in qofna runti uusan sifiican usameyn.
Tags: maareynta koontadadillaacdaacadnimada macaamiishaAdeegga macaamiishaxalka software dmc